USimona-Thandazela ooNyana bam abaDumileyo - Ukubala ukuya eBukumkanini
USimona-Thandazela Oonyana Bam Abathandwayo
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona Ngomhla we-26 kaMeyi, 2021:
Ndabona uMama: wayenxibe zonke ezimhlophe, imiphetho yelokhwe yakhe yayiyeyegolide; Umama wayenesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini entlokweni yakhe kunye nengubo eluhlaza okwesibhakabhaka ekwagqume nentloko yakhe. Ezandleni zakhe uMama wayeneruva emhlophe entle, eyayiphulukana namagqabi awayesiwa ngathi yimvula, kodwa ahlala emhle. Makadunyiswe uYesu Krestu…
Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ngokuba nilikhawulezile eli khwelo lam. Bantwana, iintyatyambo eziza kuni zilubabalo kunye neentsikelelo enizinikwa yiNkosi. Thandazani, bantwana, qinisani ukholo lwenu ngeMisa eNgcwele nangesigramente ezingcwele. Bantwana bam abathandekayo, thandazani: thandazelani iBandla lam endilithandayo ukuba intando yeNkosi ingazalisekiswa ngaphakathi kwayo. Bantwana, thandazelani oonyana bam abathandekayo nabathandwayo [ababingeleli], ukuba uBawo achukumise iintliziyo zabo, ukuze abazalise ngalo lonke ubabalo nentsikelelo, ukuze bavumele uThixo ande kwaye neziqu zabo zinciphe; ukuba baya kuba belungile ngamaxesha olingo; ukuba bangazivumela ukuba bakhokelwe luthando olukhulu lweNkosi; ukuba baya kuzilungiselela. Bantwana bam abaziintanda, thandazani.
Bantwana bam, intliziyo yam ihleli ikhathazeka ziintlungu kwabo bantwana bam baphambukayo ekukhanyeni, besinga ngakwintlambo yobumnyama nobubi. Bantwana, liphulaphuleni ilizwi lam elikubizayo, linithande, kwaye likubongoza ukuba ubuyele kuBawo! Bantwana bam, ukuba nibe niqonda nje ukuba likhulu kangakanani uthando lukaThixo ngani - uThixo, ongazange agwetywe, kodwa anisindise. UThixo omkhulu ngokokude angabambeli ngomona kubuthixo baKhe, othathe ubume bomntu, eba yindoda phakathi kwabantu, ekugqibeleni kwabokugqibela, enikela ngobomi baKhe ngenxa yenu, ngenxa yomntu ngamnye kuni, ukuze akwazi ukunisindisa … Kwaye konke oku kungenxa yothando lodwa, uthando olukhulu analo ngamnye wenu.
UAngela-Ungadinwa ngokuthandaza →